ITropical Storm Matthe iba yisiphepho sesigaba 2 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Wunderground.com
ITropical Storm Matthew isiphenduke isiphepho esigabeni 2, ngokusho kwe-United States National Hurricane Center. Ngemimoya eqinile ye I-120km / h, lesi siphepho sithathe umzila ongajwayelekile, sidlula e-Aruba, Bonaire naseCuraçao, okuyiziqhingi eziseDutch Caribbean ezingaphandle kwalokhu okubizwa ngokuthi "ibhande lesiphepho", okungukuthi, yizifunda lapho lezi zimo zesimo sezulu zingavamisile ukufinyelela khona.
Ngakho-ke, uMathewu weqa iziqhingi eziseningizimu ye-Lesser Antilles ngoLwesithathu, ngoLwesine waba yisiphepho esiwuhlobo 1, kanti namhlanje uLwesihlanu usuphenduke isigaba 2. Okwamanje, futhi ngethemba ukuthi ngeke kusaba khona ukufa, uyazi umuntu ushonile empumalanga yeCaribbean. Kubuye kwadala nomonakalo omncane eBarbados, lapho kwehliswa khona izihlahla eziningi kwacima ugesi.
Uhulumeni waseColombia ukhiphe i- isixwayiso sesiphepho esishisayo sogu lwakho, ukusuka eRiohacha kuya emngceleni waseVenezuela. Usongo lwesiphepho lwadala olayini abade eziteshini zikagesi nasezitolo ezinkulu, kanti eCuraçao ukhetho lwePhalamende luhlehliselwe isonto elizayo.
Kule nkathi yesiphepho e-Atlantic, eqale ngoJuni 1, kuye kwaba neziphepho eziyishumi nantathu ezishisayo, zazo ezinhlanu ezibe yiziphepho
Alex: kwakuyisiphepho sokuqala esenzeka ngenyanga kaJanuwari e-Atlantic kusukela ngo-1938, ikakhulukazi ngomhla ka-14. Kwakuyisigaba 1.
Earl: Isiphepho esisha sesigaba 6 esakhiwe ngo-Agasti 1.
UGaston: ngo-Agasti 22, kwavela lesi siphepho, safinyelela esigabeni 3.
UHermione: Yakhiwa ngo-Agasti 28, futhi yayiyisigaba 1.
Mathewu: Kwaba yisiphepho esigabeni 1 ngoSepthemba 29, nesigaba 2 ngosuku olulandelayo.
La NOAA uxwayise ukuthi le nkathi yesiphepho e-Atlantic izosebenza ngandlela thile kunokujwayelekile, ngokwakhiwa kweziphepho eziyi-12 kuye kwezingu-17, zazo eziphakathi kuka-5 kuya ku-8 ezingaba iziphepho, futhi phakathi kweziphepho ezinkulu ezi-2 kuye kwezine .
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ITropical Storm Matthew iba yisiphepho sesigaba 2
Ungasinda kanjani esivunguvungwini